महारानी एलिजाबेथको महान भतिजा परिवारमा सबैभन्दा योग्य स्नातक हुन सक्छ - मनोरञ्जन
टाउने — मा एक नयाँ रोयल स्नातक छ र उहाँ एक व्यक्तिगत प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ
There S New Royal Bachelor Town He S Also Personal Trainer
प्रिन्स ह्यारी र उसको जेठो भाई प्रिन्स विलियम स्नातक जीवन बिताइरहेका अविवाहित रोयलहरु भएको बर्ष बर्ष भएको छ। र हामी हेर्न मन पराउँछन् तिनीहरूका परिवारहरू बढ्न जारी राख्नुहोस्, हामीले कसैलाई त्यस्तो शाही स्नातक शून्यता भर्न कहिल्यै भेट्टाएनौं। हाम्रो लागि भाग्यशाली, हामीलाई हालसालै सम्झाइएको छ कि त्यहाँ एक टन छ विस्तारित शाही परिवारको योग्य सदस्यहरू त्यहाँ रानी एलिजाबेथको भतिजा - अर्थर छट्टो सहित।
चट्टोको बारेमा हामीलाई थाहा भएका सबै कुराको लागि पढिरहनुहोस्।
खेलहरू जुन समूहमा खेल्न सकिन्छ
आर्थर चट्टो (@artchatto) द्वारा साझा गरिएको पोष्ट
१. आर्थर छट्टो को हो?
लेडी सारा चट्टोको छोरा, आर्थर राजकुमारी मार्गरेट र एंथनी आर्मस्ट्रstrong जोन्सका नाति हुन्। आधिकारिक रूपमा, २१-वर्ष पुरानो हो रानीको भतिजा उनलाई सिंहासनको कतारमा २— औं बनाउँदै — र एक पूर्व पृष्ठ अफ ऑनर (एक औपचारिक स्थिति जुन सामान्यतया ब्रिटिश भद्रता र कुलीनताको किशोर पुरुष सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको थियो) थियो। उल्लेख गर्न मिल्दैन, उनी सोशल मिडियामा एकदम लोकप्रिय छन्, २१5 केके इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूको साथ। हामी उसको फिड कसरत भिडियो र शर्टलेस फोटोहरूले भरिएको देखेर छक्क पर्दैनौं।
बाउन्डफिटनेस द्वारा साझा गरिएको पोष्ट (@ बाउन्डफिटनेस)
उसले के गर्छ?
चट्टो हाल इडिनबर्ग विश्वविद्यालयबाट भूगोलको डिग्री लिइरहेका छन्। यद्यपि उनी स्कटल्याण्डमा रहेको वर्कआउट केन्द्र बाउन्डफिट्नेसमा निजी प्रशिक्षकको रूपमा पनि काम गर्दछन्, जहाँ उनले दुई साप्ताहिक कक्षाका साथसाथै एक-एक-सेसनको सत्र पनि नेतृत्व गर्दछन्।
अक्टुबरमा फिर्ता, जिमले च्याट्को नयाँ भूमिकाको घोषणा गर्‍यो र आईजीमा व्यक्तिगत कथनको साथ समाचारको साथ। म एक स्तर personal व्यक्तिगत प्रशिक्षक हुँ, म एक फोकस केन्द्रितको साथ शक्ति र सहनशीलता प्रशिक्षणमा विशेषज्ञता प्राप्त गर्दछु। म यस गर्मी को बेलायत वरिपरि रोक्न पर्याप्त भाग्यशाली थियो! यसले मलाई चुनौती दिईरहेको अभियान पूरा गर्न टोलीलाई प्रशिक्षण दिन धेरै अनुभव दियो। मैले शारीरिक प्रशिक्षण मेरो आफ्नै मानसिक स्वास्थ्य सुधारको लागि एक आवश्यक आधारशिला हुन पाए र म यो अरूसंग बाँड्न चाहान्छु।
ऊ एक्लो छ?
हामी ठ्याक्कै निश्चित छैनौं। यद्यपि उसको सामाजिक मिडियाको हेराइले त्यहाँ त्यहाँ महत्वपूर्ण अन्य कुनै प्रमाण छैन। (हामी नुनको अन्नको साथ यो तथ्यलाई लिन्छौं कि ऊ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई निजी राख्न कोशिस गर्दैछ।) तर उसको जीवनमा सम्भावित एसओको बारेमा कुनै ठूलो रिपोर्ट आएको छैन भन्दै हामी अविवाहित तिर झुका छौं।
We. हामीले थाहा पाउनु पर्ने अरु केही चीज?
बाहिर जान्छ, जवान शाहीले दुई विश्व रेकर्ड राखेका छ (हामी गम्भीर छौं)। आफ्नो इन्स्टाग्राम बायो प्रति, च्याट्टो ग्रेट ब्रिटेन वरिपरि कतार मा सबैभन्दा कान्छो टीम र व्यक्ति को लागी रेकर्ड हो। धेरै प्रभावशाली।
सदस्यता लिदै प्रत्येक ब्रेकिंग रोयल स्टोरीमा अप-टु-डेट रहनुहोस् यहाँ ।
सम्बन्धित: शाही समाचार राउन्डअप: मेघन र फ्यानहरूलाई हैरीको पत्र, केट मिडलटनको दुर्लभ सेल्फी भिडियो र अधिक
छाला फंगल संक्रमण उपचार उपचार
जीन्स महिला संग लगाउने आकस्मिक जुत्ता
वयस्कहरूको लागि घरमा खेल्न खेलहरू
enrique इग्लेसियास र अन्ना कोर्निकोवा भर्खरको समाचार